share sengonyama zokuphila kwakhe umuntu kumele yente elele. Yileyo indlela imizimba yethu ukuthi udinga ukuphumula ukuze lulama. Ngokusho odokotela, umuntu udinga ukulala ne usuku cishe amahora ayisishiyagalombili ngoba ukuphila okuvamile. Kodwa, ngokuyisisekelo, ubude kwethu ubuthongo kuncike ezidingweni ngazinye umzimba kanye nokwenzeka ubuthongo ngesikhathi lapho idingeka umzimba. Kodwa uma ithuba akuyona isikhathi eside ukulala, khona-ke ucela umbuzo kanjani ukulala ngaphansi kwezimo ezikhona.
Lapho umuntu elele emahora langaphasi kulangu-eziyisishiyagalombili, futhi umzimba wakhe kudinga nakakhulu lokhu kuyinsakavukela esungulwe, kudala eziningi ngokuphazamiseka. Kanjani ukulala, uma ungakwazi elaliswa amahora ayisishiyagalombili ngenxa yezimo engahlosiwe. Ngokwesibonelo, njengoba kwenzeka esikhathini esiningi, kuyanda kwesikhathi emsebenzini. Late umsebenzi asikaze, futhi umzimba engakakhuli isikhathi sokusukuma amandla esetshenziselwa baphikelele udonsa indoda ukulala. Njengomthetho, abantu bengalali ngokwanele ebusuku, ngokuvamile ngala mazwi: "Angikwazi ukulala," ayolala emini. Phambili lowo, they lonke engxenyeni yokuqala yosuku ukuwozela ukuze konke nje uwela nalo. Kuphephile ukubhala off kokunqophileko umzimba kanye sikubiza abantu ukuwozela, kodwa ungabuza mayelana izimbangela. In the mode evamile ukugujwa kokuthwasa usuku, umuntu elala ngesikhathi futhi ezimweni eziningi ngokwanele. Ngakho-ke, kungase kube umuntu phakade ukuwozela eduze empeleni ulale Sekuhlwe kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo ukucabanga ukuthi ukulala, engaboni ukuthi udinga okungenani hamba ulale.
Ziningi izindlela ukuba imfanelo enhle ukulala, futhi walokhu ulula. Isinyathelo sokuqala ukuba liphenye ukuthi singakanani isikhathi udinga ukulala isikhathi ukululama okugcwele nje, ukusheshe ulale ubuthongo inombolo amahora. Uma ungafuni ukuchitha isikhathi kusihlwa ukulala, kufanele ucabange mayelana izimbangela vysypaemosti ezimbi. Isizathu kungaba i embhedeni ungakhululekile noma kumatilasi. A indawo yokulala kumele kube ubulukhuni amaphakathi, umzimba angawi ngokusebenzisa ekujuleni kumatilasi, kodwa ngesikhathi esifanayo, wakuphinda wabuka emzimbeni. Inhloko kufanele alale omkhulu, ontofontofo futhi ingubo kufanele kube mnandi uma uyithinta. Lokhu kunikeza ubuthongo ukhululekile futhi ikhono ukulala isikhathi esifushane.
Nani kumelwe unake okukhethekile kanye aeration izindawo, ubuthongo umsindo ukupholisa ezidingekayo njalo fresh air lokulala. Ngakho-ke, kungcono ukulala nomuntu windi livuliwe ehlobo. Yenza iphupho oqinile kungabuye ukuphuza phambi kwakhe ingilazi yobisi olufudumele, kodwa le ndlela akunakubangelwa imithi yesintu eziqinisekisiwe indlela enjalo akekho unika. Kodwa akekho oyekayo ukuba ngokuzimela ukuqinisekisa le ndlela, futhi ingilazi yobisi ngaphambi kokulala, ngoba ubisi akuyona ingozi. Lezi yizinto ezimbalwa nje amathiphu ambalwa sendlela ukulala, kodwa eqinisweni eningi kubo. Kulabo ikakhulukazi kungagcini ngesikhathi ukulala, kukhona indlela, indlela ukulala 4 amahora. Ngokumangalisayo, salokhu udinga kuphela ukuya embhedeni at 9 enhloko kusihlwa futhi uvuke ekuseni. Ososayensi baye bafakazela ukuthi aqinise kakhulu futhi eliphezulu ubuthongo ngesikhathi kule nkathi yesikhathi. Nokho, kufanele ukuba ubambelele ezinye izindlela ezinjalo ubuthongo iDemo. Empeleni, it is hhayi ukuyolala usuthi, ngemicabango ngezinkinga kwansuku zonke futhi kuyinto efiselekayo - ukuthatha eshaweni efudumele. Ngakho ongakhetha ubuthongo enempilo emaningi khona, udinga kuphela ukukhetha engcono njalo ngokwanele.
Imithetho yesimanje ngoba Bandy
IzAga nabomcondvophika: Izibonelo nencazelo